Fahazarana 6 mampatavy
Avy amin’ny fahazaran-dratsy ara-tsakafo no mahatonga ny tavy hitoetra. Ndeha ho fantarina inona avy izy ireo mba hisorohana azy.
Mandoro tavy amin’ny mananasy sy citron
Raha tiana hihena haingana ny vatana dia anisan’ny taova diovina voalohany indrindra ny aty.
Paoma sy poara atao smoothie, mampihena
Akora ilaina : · Paoma 3 · Poara 2 · Kiwis 2 · Ravina epinara 3 na 4 tanana · Voasarimakirana 1/2 · Sakamalaho mitovy halava amin’ny ankihibe
Mihena haingana loatra, tena manimba !
Samy te-hahita vokatra haingana avokoa rehefa hampihena tena. Ary misy mihitsy no manezaka mafy mba hihena be ao anatin’ny fotoana fohy.
Jus paoma sy persily, mamotika tavy!
Ny paoma no voankazo voalohany manampy amin’ny fampihenan-tena. Fotoany rahateo izao ka tsara araraotina izany. Ity misy zava-pisotro iray mifototra amin’ity voankazo ity, hanampy anao hihena :
Nahazo lanja tao aorian’ny fety : araho ireto
Taorian’ireny fety nisesisesy ireny dia mety nitombo lanja ianao. Ahoana àry ny atao mba hihena haingana?
Spiruline, mampihena sy mahasalama
Taorian’ireo fihinanana sakafo matsiro sy matavy nifanesy dia tsara diovina ny ao anaty amin’izay miasa tsara ny aty sy ny voa, no mora mihintsana koa ireo tavy sy poizina niandrona
Mandro amin'ny rano mangatsiaka mahavery 100 kcal / andro
Amin'izao vanim-potoana efa mihamangatsiaka izao mihitsy izy ity no tena mandaitra. Faranana amin'ny rano mangatsiaka ny fandroana. Atao mandritra ny 2 minitra tsy an-kiato. Mety manaikitra hoditra tokoa kanefa mandany kaloria izany. Lasa mandany angovo kokoa ny vatana mitazona ny mari-panany ho 37°C. Sady hihamafy koa ny hoditra no afaka ny “cellulite”.
Mihinana sakafo mamanala mahavery 60 kcal / andro
Tsy maintsy mandany hery koa ny vatana mba hitazonany ny maripanany rehefa ianao mihinana sakafo vao nivoaka ny vata fampangatsiahana.
Mampiasa fitaovam-pihinanana manga
Manapaka ny fahazotoan-komana ny loko manga izay voasokajy ho loko mangatsiaka. Araka ny fikarohana natao momba ny fomba atao hampanintona sy hampazoto homana ny sakafo aroso no nampivoitra izany. Tsikaritra tokoa fa tsy dia ahitana loko manga ny sakafo amidy eny amin'ny tsena lehibe. Mifanohitra amin'izany kosa, fantaro fa mampazoto homana ny loko mafana ary voalohany amin'izany ny loko mena. Ataovy manga noho izany ny lokon'ny fitaovam-pihinanana raha te-hihena.
Tsy milalao "jeux vidéos"
Araka ny fikarohana nataon'ny "nutritionnistes" avy ao amin’ny oniversite Göteborg, ao Suède, dia mora matavy kokoa ny vehivavy tia milalao jeux videos. 4 kilao no mety azony raha mihoatra ireo vehivavy tsy manao izany. Ny lehilahy kosa anefa zara raha mitombo satria 500g eo raha betsaka no azon'izy ireo.